mercredi, 27 janvier 2021 21:43
Ela ihany no narenesako ity resaka TGV ity, fa nanongilan-tsofina foana aho fa mbola tsy nilaza anisy fiaran-dalamby TGV eto amintsika mihitsy. Andrasana ilay lohamasinina fahagola an'ny FCE mampitohy an'i Fianarantsoa-Côte Est, mbola ampifamenoana amin'ilay nafarana ny piesy, dia mbola lokoina ahazo aingo tsara. Andrasana ihany koa ny Tramway.Raha ny Madarail aloha dia tsy hitako izay fanatsarana nentiny, asa maninona loatra, na ny famataranandron'ny Gara aza tsy vitany akory ny manamarina azy. Tafandria mandry e.Patrick
mardi, 26 janvier 2021 21:33
Miankina amin'ny fomba nakana fahefana ny fomba ampiasana ny fahefana
Raha fahefana azo tamin'ny basy sy ny hery dia ampiasa basy sy hery amin'ny fahefana azo. Raha tamin'ny hala-bato sy fitaka dia halatra sy fitaka ihany koa no ampiasana ny fahefana.Raha fahefana azo tamin'ny vola sy kolikoly dia fitondrana ampiasa vola sy kolikoly ihany koa.Raha fahefana azo tamin'ny fomba madio sy demokratika, dia ampiasa ilay fahefana amin'ny fomba madio sy demokratika. Tafandria mandry e.Patrick
lundi, 25 janvier 2021 21:34
Majunga nahazo kalizy, tia famatra ein
Pilo kely : Majunga nahazo kalizy, tia famatra ein Bonne nuit nareo Sotema, draiky Amborovy agny, mody aloha avy amin'ny bord, tsao tara bus Patrick
dimanche, 24 janvier 2021 20:41
Mampamangy ianareo tantsaha mpamboly vary
Pilo kely : Mampamangy ianareo tantsaha mpamboly vary, fa ny fitondrana dia anafatra vary hatrany ka amidiny 500ar ny kapoaka, ianareo tsy afaka hivarotra amin'izany vidiny izany raha tsy hoe angaha hiditra fatiantoka. Mazava be izany fa ny tantsaha karana any Inde sy Pakistan no tohanan'ny fitondrana. Izahay hihinana vary gasy sy makalioka hatrany fa aza malahelo. Tafandria mandry e.Patrick
samedi, 23 janvier 2021 20:41
Pilo kely : Papa mikepoka ny karaman-janany
Manan-janaka 6 mianadahy Ray aman-dreny iray, samy miasa izy 6 ireo, ary samy manana ny tokatranony sy ny vady aman-janany fa miara-monina anaty tamboho iray lehibe aby. Rehefa faran'ny volana dia alefa any amin'ny kaonty bankin'izy mivady Ray aman-dreny avokoa ny karaman'izy 6 mianadahy zanany ireo.Rehefa andoa hofan-trano sy écolage amin'izay ireto tokatrano 6 ireto, dia miantso ny Ray aman-dreny dia mangataka vola andoavana hofan-trano sy écolage, mangataka ny atao sakafo, ny andoavana jiro sy rano, ny frais bus, ny fanafodin-jaza, ny hividianana akanjo fripy. Ny lahimatoa matetika mitrerona dia mahazo tsikelikely eny ihany, satria mipetraka ao avaratry Papa, iretsy 5 ambiny miandry kely, omena tsindraindray eny, nefa i Papa amin'io mandeha V8, ary manana maitresse mihitsy aza. Asa akory hozy ravinanto 6 aby ireo, miasa misasatra ho an'i rafazona. Tafandria mandry e.Patrick
Ny kapoaka dia famarana hadiry, fa tsy lanja, ny vary dia misy maivana misy mavesatra arakarak'ilay vary. Omena anao ny taranja kajy T5 : - Hadirin'ny kapoaka = Haavo x Velaran'ny faribolan'ny vodi-kapoaka- Velaran'ny faribolana S = ΠR² (pi x R tanam-paribolana, atsasaky ny savaivo, toradroa)- Ny lanjan'isam-bentin-kadiry (masse volumique) vary fotsy manta 0.7g-0.9g/cm3, aza afangaro amin'ny hakitroka (densité)- Ka ny lanjam-bary iray kapoaka izany dia P = lanjan'isam-bentin-kadiry x Hadirin'ny kapoaka Miovaova izany io lanjam-bary iray kapoaka io.
Mitanila tanteraka ny vidin-drano jifain'ny mponina amidin'ny Jirama. Ny any an-tokantrano manana robinet ao Antananarivo, mandoa 415ariary ny 1 000litatra (1m3) (Bidon jaune 50 isa), ireo milaha-drano amin'ny pompy anefa dia mandoa 500ar ny iray bidon, mbola tsy anatiny ny saran'ny mpitaona. Ny any amin'ny faritany moa dia mandoa vidin-jiro indroa na in'efatra avo heny amin'ny ao Antananarivo mihitsy. Ka rehefa nosakanana ihany ny fampiakarana ny vidin-jiro sy rano dia ampiaro ilay politika fampitoviana ny aloan'ny rehetra fa dia miangatra loatra raha ny milaha-drano sy ny any amin'ny Faritany hatrany no mandoa lafo, fa ireo misonanika manokatra robinet isak'izay mahatsiahy no miadana mandoa mora. Tafandria mandry ianareo izay tsy afaka nisasa.Patrick
Pilo kely : Inona moa zany no tena vitan'ny Ben'ny Tanàna Antananarivo Renivohitra izao? - Lalana ?- WC Public gratuit ?- Easy Park foanana ?- Parking ?- Ny tsena? Ny misy aza narodana- Ny fitohanana fiara? Ny lalana an'ny fiara, ny trotoire an'ny mpandeha an-tongotra, ny tsena an'ny mpivarotra?- Ny urbanisme?- Ny pompier ?- Ny fanadiovana tanàna sy tatatra?- Ny piscine municipale, ny Bibliothèque, ny tranom-pokonolona ?- Ny biraom-ponkontany ?- Ny EPP izay andraikitry ny Kaominina?- Ny fandaminana ny fitaterana? Mbola nitantara aza izy fa tsy hijaliana intsony ny jiro sy rano, ny fako moa dia efa tsy resahina. Tsy haiko izay ataony mandeha vedette any amin'ny faritra andrefan'ny nosy iny, andeha atao hoe mitsangatsangana izy na olona mitovy. Tafandria mandry aby, fa za andeha an'habaka hijery an'i Joe Biden manao fianianana amin'ny 08ora alina aty amintsika. Patrick
lundi, 18 janvier 2021 21:57
Sary nomena Mananjary
Pilo kely : Sekoly bidon jaune
Sekoly mitsinjo lavitra, avy mianatra, tsy mila mody fa avy dia matsaka mitondra rano. (Sary nomena Mananjary) (Jereo Sary Tohiny)
Pilo kely : Maro ireo mpianatra Oniversité nody noho ny Covid-19 tamin'ny taon-dasa no tsy tafaverina nianatra intsony fa nijanona Courage zandry fa mitohy ny fiainana, aza kivikivy fa misy varavarana hafa misokatra, aza malahelo ny efa nikatona. Tafandria mandryPatrick